UWSA "O"တပ်ဖွဲ့မှ စစ်ရေးအသင့်ပြင်နေ
“အစိုးရက ပစ်မှတ်ထားတဲ့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ရဲ့ လွယ်ခေါက်၊ လွယ်စေး၊ လွယ်ချို၊ လွယ်လန်းဘက်ကို အင်အားတွေ တိုး ချလာတယ်။ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ဘက်ကလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ အင်အားတွေတိုးဖြည့်ထားတယ်။ နှစ်ဘက်တင်း မာနေတဲ့အခြေအနေမှာ UWSA ဘက်ကလဲ သူတို့ဘက်ကို တိုက်ပွဲပျံ့သွားမှာစိုးလို့ထင်တယ်။ အသင့်ပြင်နေတယ် ” ဟု သျှမ်းပြည်တပ်မတော် အရာရှိတဦးကပြောသည်။
“လွယ်စေးတောင်ကနေကြည့်ရင် ပန်ဆန်းမြို့ထဲကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်လေ။ ဒီတောင်ဟာ ပန်ဆန်းမြို့ကိုဝင်ဖို့ အဓိက တံခါးတချပ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီတောင်ကို မြန်မာစစ်တပ်က အခြေကုပ်ရယူနိုင်ရင် ဝ တပ်ဖွဲ့ အတွက် အခွင့်မသာတော့ဘူးလေ။ အရင်အပတ်ကလဲ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က တင့်ကားတွေ၊ သံချပ်ကာကားတွေ၊ လက်နက်ကြီးတွေ ပို့ဆောင်ထားလို့ ၀ အနေနဲ့လဲ စိတ်မချနိုင်တော့ဘူးလေ” ဟု ဆိုပါသည်။
“သင်္ကြန်တုန်းကလဲ ဘယ်တပ်ဖွဲ့ ထောင်ထားတဲ့ မိုင်းလဲ မသိဘူး၊ ကျမတို့ မိုင်းတုံမြို့နယ် ပုံပါကျင်မြို့နယ်ခွဲက ဝ တပ် ဘက်အသွားလမ်းမှာဘဲ။ လားဟူအမျိုးသား နှစ်ဦးစီးလာတဲ့ဆိုင်က တက်နင်းမိလို့ ပေါက်ကွဲတာ။ နှစ်ယောက်စလုံးပွဲ ချင်းပြီးဘဲ။ ကိုယ်ခန္ဓာတွေ အပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားတယ်။ ဆိုင်ကယ်လဲ မီးလောင်လွှင့်စင်သွားတယ်” - ဟု ပုံပါကျင် ဒေသခံ ဝန်ထမ်း တဦးက ပြောသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/30/20130အကြံပြုခြင်း
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာနေရာကို သွားလာရခက်ခဲတဲ့အတွက် ကြံရာမရတော့တဲ့အဆုံး ရဲတွေက
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသမ္မတကြီးနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံမှ Gandantegchinlen ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွင်း လေ့လာကြည့်ရှုနေစဉ်တွေ့ရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (30-4-2013)
တစ်ဘက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဘက်ကို ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၆၀ ကျော် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်လာကြပြီး သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေ တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကို တစ်ဘက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ကနေ ပြောင်းရွှေ့လာသူတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းက အိမ်ထောင်စု ၇၀ ဝန်းကျင်လောက်သာရှိခဲ့ရာကနေ အခုလက်ရှိမှာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၆၀၊ လူဦးရေ ၆၀၀ ကျော်အထိ တိုးလာနေတယ်လို့ အဲဒီရွှေ့ပြောင်း လာသူတွေအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေ တဲ့ မောင်တောဒေသခံ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီအိမ်ထောင်စုတွေရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WFP က စားနပ်ရိက္ခာတွေ ကူညီပေးနေပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်စာရင်းမဝင်လို့ဆိုပြီး ကူညီမှုထောက်ပံ့မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် အခုလို အခက်အခဲတွေ ပိုမိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့ ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေအရေး အဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ မောင်တောမြို့၊ ဗဟိုကျောင်းတိုက်က ဆရာတော် အရှင်အာစာရက RFA ကို မိန့်ကြားပါတယ်။
တစ်ဘက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်တွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက မောင်တောဒေသတစ်ဝိုက်က နယ်စပ်ဒေသပညာရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (နတလ) အစီအစဉ်နဲ့ နေရာချပေးထားတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ အခြေချနေထိုင်ခွင့်ပြုထားပြီး စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်း လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပေမယ့် အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုဟာ တစ်စတစ်စများပြားလာနေတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက် လုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုလက်ရှိမှာ အဲဒီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာ ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို အဓိကထား မှီခိုနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကို ရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့ ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတွေထဲမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေအပြင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ မာရမာကြီး၊ ခမီး စတဲ့ လူမျိုးနွယ်စုတွေ အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တစ်ဘက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသ နတ်ကျောက်စရီ၊ အလယ်ခိုဒေါင်၊ မော်ဒုတ်ကြီး၊ မော်ဒုတ်ချေ၊ ဘောဒူဝနဲ့ ရွာတော်ခရိုင်တွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အခြေချနေထိုင်လာခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး မူဆလင်အစွန်းရောက်တွေရဲ့ ရန်ပြုမယ့်အန္တရာယ်ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ရွှေ့ပြောင်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဥက္ကံမြို့မှာ ဆူပူမှုဖြစ်ပွား
ဥက္ကံမြို့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်
၃ဝ-၄-၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ဝ၉:ဝဝ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဥက္ကံမြို့၊ ဆင်ဖြူရှင်ရပ်ကွက်နေ အလံတိုင်ကျောင်းတိုက် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင် ဦးလှိုင်တင်(၆၂)နှစ်သည် တိုက်ကြီးရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အလံတိုင်ကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်သည့် ကိုရင်အရှင်ပုည (၁၁)နှစ်သည် ဥက္ကံဈေးတောင်ဘက်၊ ဘုရားကြီးလမ်းအတိုင်း ဆွမ်းခံကြွလာစဉ် ဈေးဝယ်လာသူ မဝင်းဝင်းစိန် မှ ဝင်ရောက်တိုက်မိ၍ သပိတ်လွတ်ကျပြီး အဖုံးကွဲသွားကြောင်း သိရှိရသဖြင့်
မဝင်းဝင်းစိန်ကို အရေးယူပေးရန် တိုင်တန်း၍ ဥက္ကံရဲစခန်း(ပ)၁၁၂/၂ဝ၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၉၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်သူ(၂ဝဝ)ဦးခန့်မှ ၁၃:၁၅ အချိန် ဥက္ကံမြို့၊ အနော်ရထာ ရပ်ကွက်ရှိ ဈေးဗလီသို့ ရောက်ရှိလာပြီး လူ(၁ဝ)ဦးခန့်မှ အုတ်နီခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်၍ ထွက်ပြေး သွားခဲ့သဖြင့်
ဗလီရှေ့ရှိ ၃ × ၃ ပေခွဲခန့်ရှိ မှန်(၆)ချပ် ကွဲသွားခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်မီတာပုံး(၂)ပုံး ကျိုးပဲ့ပျက်စီးကာ လူထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုမရှိကြောင်းနှင့် အခင်းဖြစ်နေရာသို့ တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အခြေအနေ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
၁၄:၂၅ အချိန်တွင် ဈေးအနီး ဆိုင်ခန်း(၂၅)ခန်းအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများအား လူ(၂၅)ဦးခန့်မှ လမ်းမပေါ်သို့ ဆွဲချခဲ့ပြီး ပြည်သူ(၂ဝဝ)ဦးခန့်မှ ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြောင်း သိရှိရသည်။
၁၄:၄ဝ အချိန်မှ ၁၄:၄၅ အချိန်အတွင်း အခြေအနေထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဦးစီးအဖွဲ့မှ သေနတ်(၄)ချက် ချောက်လှန့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
၁၅:ဝဝ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့်အဖွဲ့ ရောက်ရှိ လာပြီး နယ်မြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၁၅:၁ဝ အချိန် အခြေအနေ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၅:၄၅ အချိန်တွင် ဥက္ကံမြို့ပြင်၊ မင်းရဲကျော်စွာရပ်ကွက်၊ လယ်ကွင်းကောက်ရိုးပုံအနီးတွင် ဒဏ်ရာရရှိသူ(၂)ဦးအား တွေ့ရှိ ရသဖြင့် ဆေးကုသနိုင်ရေး ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီးရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးနှင့်အဖွဲ့မှ ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေး ခဲ့ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရေး ဖော် ထုတ်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အထက်ပါဖြစ်စဉ်တွင် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၈ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိရသဖြင့် စုစုပေါင်း ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၀ ဦးရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဥက္ကံမြို့မှာ ဘာသာရေးကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံတဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာက ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက် မှာတော့ လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်တွေက အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ကိုအောင်ရဲမောင်မောင် က ရန်ကုန်မြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ် ဥက္ကံမြို့မှာ ဒီကနေ့ အစောပိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်ရင်ငယ်တပါးကို မူဆလင် အမျိုးသမီးတဦး မောင်းလာတဲ့ မော်တော် ဆိုင်ကယ်နဲ့ မတော်တဆ ပွတ်တိုက်မိရာက ပဋိပက္ခတွေ စတင် ဖြစ်ပွား လာခဲ့ရတာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တချို့က မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားရာ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ မူဆလင် ဗလီ အပါအ၀င် ဈေးဆိုင်ခန်းတချို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ တာကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးလည်းဖြစ်၊ သမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွဋ် ကတော့ ဆူပူအကြမ်းဖက်သူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းမှာ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ Facebook အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။
တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ဈေးဆိုင်ခန်းတချို့ မီးလောင်ပျက်စီးမှု ရှိခဲ့သလို၊ ဗလီကျောင်းမှာလည်း ပျက်စီးမှု အနည်းအကျဉ်း ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆူပူမှုတွေအတွင်း အထိအခိုက် အပျက်အစီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥက္ကံမြို့ခံတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးနိုင် ပြောပြတာကတော့ -
“ဒဏ်ရာရတာ ဘာညာမရှိပါဘူး။ ဆိုင်တချို့နဲ့ အိမ်တချို့ပေါ့ နည်းနည်းပါးပါး ထိခိုက်သွားတယ်။ တစ်လုံး နှစ်လုံးလောက်ပါပဲ။ ကြားတဲ့သတင်းအရတော့ နှစ်လုံးပျက်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။”
မကြာသေးခင်တုန်းကလည်း မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဈေးဝယ်သူနဲ့ ဈေးရောင်းသူ စကားများရာက စလိုက်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ပဲခူးတိုင်းထဲက မြို့တချို့ကိုပါ ကူးစက်ပြန့်ပွားခဲ့သလို၊ ထိခိုက်သေကျေမှုတွေလည်း ကြုံခဲ့ရတာပါ။
ဒီလို ဘာသာရေး ကွဲပြားမှု အခြေခံတဲ့ တင်းမာမှုတွေ ရှိနေရာက အခုလို မတော်တဆမှုကနေ ပြဿနာတွေ ကြီးထွားခဲ့ရတာလို့လည်း ဥက္ကံမြို့ခံ ဦးစိုးနိုင် က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အခုနောက်ဆုံး ပဋိပက္ခအတွင်းမှာတော့ လူတွေ အထိအခိုက် အသေအပျောက်တော့ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
“နာကျင်ဒဏ်ရာရတာတို့ ဘာတို့ အဲ့လိုမျိုးတော့ မကြားဘူး။ စဖြစ်တာကတော့ အရင်ရက်တွေတုန်းကဗျာ တဘက်နဲ့တဘက် တင်းတင်းမာမာလေးတွေကတော့ ရှိနေမှာပေါ့။ အခု လောလောလတ်လတ်ကတော့ ကိုရင်လေးတပါးကို မူဆလင် အမျိုးသမီးတဦးက ဆိုင်ကယ်လ်နဲ့ ၀င်ချိတ်မိတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မကျေမနပ် ဖြစ်ကြတာပေါ့လေ။”
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဗလီတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့သလို နှစ်ဘက်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ လူနေအိမ်နဲ့ ဈေးဆိုင်တချို့လည်း ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ ဥက္ကံဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့အတွင်းမှာ အခုလို အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ရပ်တွေ တင်းမာနေချိန်မှာပဲ ရန်ကုန်က ရွှေည၀ါ ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်က နှစ်ဘက်လူမျိုးစု နှစ်စုအကြား ပြေလည်မှု ရရှိဖို့အတွက် ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးတာတွေလည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဦးစိုးနိုင် က ပြောပါတယ်။
“အခြေအနေအားလုံးကို ထိန်းနိုင်တဲ့ အနေအထားတော့ ဖြစ်သွားပြီ။ ရွှေည၀ါဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ၀င်ထိန်းတယ်။ တော်တော်လေး တန့်သွားတယ်ပေါ့။ ပြီးသွားသလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။”
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လအတွင်းမှာလည်း မိတ္ထီလာမြို့မှာ ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့အထိ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက်ခြမ်းမှာလည်း ဒီနေ့အထိ ဘာသာရေးအပေါ် အခြေခံတဲ့ အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီတုန်းက ဆူပူအကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တချို့ကို စတင် ဖန်တီးခဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကို အာဏာပိုင်တွေက အရေးယူမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေသလို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကလည်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို အခြေခံတဲ့ ပြဿနာတွေ မတက်ဖို့နဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြုပြီး ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော်သူတွေကို ဥပဒေအရ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့လည်း တရားဝင် ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူအသေအပျောက်တွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုကြောင့် အဲ့ဒီတုန်းက အခြေအနေတွေဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွား အဆင့်ကို ကျော်လွန်နိုင်ပြီလို့လည်း မြန်မာအစိုးရ အာဏာပိုင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့အစိုးရပိုင် မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြထားပြီး ဒီနေ့မှာပဲ အခုလို သွေးထွက်သံယို ပျက်စီးမှုတွေ ရှိလာတဲ့အထိ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရတာ၊ :D အထက်မှာ Chief steward ရယ် union Representative
ဖူး၊ပိုင်ရှင်ကခန့်ထားတာ။union steward နဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေရ
union steward တာဝန်ကသူတို့အလုပ်ကြပ်တွေမတရားလုပ်တာရှိ
In charge supervisor နဲ့ရှိနေတာပါ။ပြဿနာကတော့ supervisor
သူတို့မှာပြဿနာရှိတယ်အရေးယူရမယ်ပေါ့။ဒီလို case မှာsupervisor
(Let him do.) ပဲလုပ်ရတာပေါ့..၊တရက်အလုပ်မလာရအပြစ်ပေးတယ်။
ရှိပါတယ်။(Let him do.) ပေးလုပ်လိုက်တာကsupervisorစိတ်ကျေနပ်
union Representative ကိုပြောပြ၊နောက်မလုပ်ဖို့တော့နဲနဲကြပ်ပေးရ
တာပေါ့၊union Representative အဆင့်အနေနဲ့ဒီလိုပြဿနာလောက်ကို
(One time cancelling request)လုပ်နိုင်တယ်၊ကျွန်တော့်တာဝန်ကုန်ပြီ၊
In charge supervisor ကို ပြောလိုက်တော့လက်ခံပါတယ်။
April 20,2011 Worker union steward training(Toronto)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/29/20130အကြံပြုခြင်း
မွန်ဂိုးလီးယား သမ္မတကြီး တည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ နေ့လည်စာ
အဖေက တစ်နပ်စား သားဓါးထိုးမှုသက်ဆိုင်ရာရဲမပြောရဲ
(မြန်မာ့သံတော်ဆင့်- အတွဲ၂- အမှတ်(၇)- ဧပြီ ၂၇-၂၀၁၃)
Kaung Naing မှန်ကန်သည့်သတင်းများကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရေးလေ့ရှိသည့် ဆရာဟာဂျူလီ(ကသာ)သည် အမျိုးသားသတင်းဆု (ကာတွန်း)ုအတွက် ဆန်ကာတင်အဆင့်တွင် ပါရှိသည်ကို သိရှိရပါ၍ ဆရာ့အတွက် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဆရာရေးသားခဲ့သည့် မကာင်းခင်ကဆိုးခဲ့ပါသည်ဟုသော သတင်းဆောင်းပါးအတွက် မန္တလေးဘူတာကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းဟောင်းများကို ချဉ်းကပ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ သိရှိရသည်မှာ ထိုစဉ်က မန္တလေးဘူတာကြီး ရုံပိုင်ချုပ်မှာ ရခိုင်လူမျိုး ဦးစံမောင်ဟုသိရှိရပါသည်။ ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးသိန်းစိန် (ယခုသမ္မတကြီး) နှင့်အဖွဲ့အတွက် ရထားလက်မှတ်များ စီစဉ်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဘူတာတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့် အချိန်မမှန်သည့် နာရီအပျက်ကို ကြည့်ပြီး အချိန်ရသေးသည်ဟုဆိုကာ အပြင်ထွက်စားသောက်ကြရာမှ အပြန်တွင် ရထားမမီသည့်အတွက် ဒေါသထွက်ကာ ထိုးကြိတ်သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရုံပိုင်ကြီးမှ နောက်ရထားအတွက် လက်မှတ်များထပ်မံ စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ရုံပိုင်ကြီးမှ မှားယွင်းတတ်သည့် လူငယ်အရာရှိတို့၏သဘာဝကို သိရှိပြီး ဘယ်ကိုမှမတိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုတော့လည်း အသက်အရွယ် ရာထူးဂုဏ်သိမ်နှင့် ပြည့်စုံကာ ပြည်သူချစ်သော ပြည်သူအားကိုးသော ပြည်သူ့ဆန္ဒကို တတ်စွမ်းသမျှ အကောင်အထည်ဖော်နေသော သမ္မတကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆရာဟာဂျူလီ (ကသာ) ရေးသားသည့် ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ် မမှန်မကန်ဇာတ်လမ်းဆင် တုံ့ပြန်ရေးသားနေသည်များကို တွေ့ရှိနေရပါသဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်း ရေးသားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဘက်တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နေစဉ်က မိုက်ခဲ့သော်လည်း အရပ်သားအစိုးရ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ပြည်သူ့အပေါ် ကောင်းနေသည့် သမ္မတကြီးအတွက် လေးလေးစား စားနဲ့ ဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘီဘီစီ ဦးကျော်စိုးဟိန်း's photo.
(၂၈-၄၂၀၁၃)ရက်နေ့မှစ၍ဒေသခံလယ်သမားများအားခြိမ်းခြောက်စော်ကားသည့် စာများလိုက်လံဝေငှခဲ့သည့်အပေါ် လယ်သမားများမှ ပြန်လည်၍ တုန့်ပြန်သောအား
ဖြင့် ဒေသခံလယ်သမား(၃၀၀)ကျော်ခန့် ညောင်ပင်ကြီးရဲစခန်း၌သွားရောက်အဖမ်းခံနေကြပါသည်၊ ရဲစခန်းရှေ့၌ယနေ့ညနေ(၅း၂၀)နာရီတွင် အဖမ်းခံသည့်အနေဖြင့်ထိုင်နေ
ကြခြင်းဖြစ်သည်၊၊ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကလုပ်ချင်တိုင်းလုပ် ဖိနှိပ်ချင်တိုင်းဖိနှိပ်နေတာကိုကာကွယ်နေတဲ့ရဲတွေက ကျုပ်တို့လယ်သမားတွေကိုကူညီနေတဲ့သူတွေကိုကျတော့ အမှု
ဆင်ပြီးသေနတ်ပြစ်ဖမ်းဖို့လုပ်နေတယ်၊ လက်ခံထားသူကိုလဲဖမ်းမယ်ဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်တယ်၊ ကျုပ်တို့နဲ့ကူညီနေသူတွေကတသားထဲပဲဘယ်တော့မှသွေးမကွဲဘူး
အမိန့်အတိုင်းအခုဖမ်းလာအဖမ်းခံတာဆိုပြီး ရဲစခန်းရှေ့တွင်အဖမ်ခံနေကြသည်၊ အာ
ဏာပိုင်များမှလုံထိန်းများ၊ ရဲများထပ်မံဆင့်ခေါ်နေပြီး လယ်သမားများကို ကိုင်တွယ်
နိုင်ရန် ပြုလုပ်နေကြပြီး၊ မနက်ဖြန်မှလာခဲ့ပါဟု ရဲမှပြောဆိုခဲ့ပါသည်၊ ဒေသခံများအား ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတယ် လူစုခွဲပေးပါခင်ဗျားတို့သတင်း မမှန်ရေးတဲ့ဂျာနယ်ကို တရားစွဲတဲ့ကိစ္စလဲ ကျနော်လုပ်နေရပါတယ်၊ မနက်ဖြန်မှလာပါဆိုပြီး လော်စပီကာဖြင့်အော်ပြီးနောက် ဒေသခံများမှမနက်ဖြန်လာရှင်းမည် ကိုယ်ထုတ်သည့်အမိန့်ကိုတာဝန်ယူရမည်ဟုပြောဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့ကြသည်၊၊ဦးပိုင်လုံထိန်းများ ယနေ့ညတွင်မိုးကြိုးပြင်ရွာဘက်တွင်ရှိနေသော ကူညီသူများကိုဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးမည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသောကြောင့် ဒေသခံအချို့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးကာကွယ်ရေးစနစ်များ စီမံနေကြသည်၊၊
မွန်ဂိုလီယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် ဒီမိုကရေစီအသိုက်အ၀န်းရဲ့ ညီလာခံ
r မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရောက်“ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ညီလာခံ”မှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Tun Wai
မွန်ဂိုလီယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက်...